watchOS 5.3.2 inowanikwa yeChikamu 4 uye iPhone ine iOS 12 | Ndinobva mac
watchOS 5.3.2 inowanikwa yeChikamu 4 uye iPhone ine iOS 12
Pane imwe mamiriro akasarudzika nevashandisi vane Apple Watch Series 4 uye iPhone 5s kana 5c. Mamiriro ezvinhu aya anoda kuziva sezvo iwo maviri mamodheru e iPhone anowirirana zvizere newachi, asi haigone kugadzirisa kuIOS 13 saka zvinoita sekunge vamwe vashandisi vaive nemawachi "akakiyiwa" uye ikozvino iyi vhezheni itsva yewatchOS 5.3.2 inogadzirisa.
Uku kufamba kusinganzwisisike sezvo zvisiri zvakajairika kuti Apple ikanganwe kugadzirisa zvishandiso zvekushanda kwayo kwazvinoburitsa gadziriso, dambudziko nderekuti isingaenderane neIOS 13, iyo vhezheni yewatchOS 5.3.2 yavakaburitsa yakakonzera kuti mawachi amire kushanda kana kuti havana kuzviita nemazvo.
Iyi vhezheni itsva 5.3.2 ine huwandu hwakaenzana seyakare yakaburitswa sezvo zvese zvainoita kupa mhinduro kumatambudziko akaonekwa mukushanda uye iri chete yeApple Watch Series 4, sezvo mawatch aya kunyangwe achigona kuisa watchOS 6, haaatore nekuti ari paIOS 12.x.
Isu tinoziva izvi zvinogona kuita sekunge zvinovhiringa asi chiri chinhu icho avo varikunakidzwa parizvino Apple Watch Series 4 uye iPhone 5c kana 5s vachanzwisisa zvakakwana. Chero zvazvingaitika, vamwe vese vashandisi vakasara kunze kweiyi vhezheni vhezheni yakatangwa naApple, saka haufanire kutarisa iyo Watch application> Software yekuvandudza ye iPhone yako nekuti haugone kuwana chero nyowani vhezheni yekurodha pasi. Kuburitswa kunogadzirisa bugs uye zvinogona glitches pakati pezvinhu izvi, hapana nhau pamusoro penzvimbo, mashandiro kana zvimwe zvakadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 5.3.2 inowanikwa yeChikamu 4 uye iPhone ine iOS 12
Kana iwe uchimhanyisa iwe uchiri kukwanisa kurodha pasi macOS Mojave kuti ugadzire iyo yekumisikidza
Ehe, iwe unogona kuona iyo yakatamisirwa zvinhu folda kana uchiisa macOS Catalina